भारतिय चर्चित कमेडियन को सम्पती कति ? थाहाँ पाउनुहोस - E ALL NEPAL
भारतिय चर्चित कमेडियन को सम्पती कति ? थाहाँ पाउनुहोस
चलचित्रमा नायक, नायिका र खलनायक मात्र नभई कमेडियनहरुको विशेष महत्व हुने गर्छ। चलचित्रलाई मनोरन्जनको लागि हेरिने हुँदा हँसाएर कमेडियनहरुले मनोरन्जन दिने गर्छन्। कमेडि गर्न सबै कलाकारले भने सक्दैनन्। जसको कारण चलचित्रमा कमेडियनहरुको छुट्टै महत्व र स्थान हुने गर्छ। बलिउडमा पनि धेरै स्थापित कमेडियनहरु रहेका छन्। यस्तै स्थापित र धनि कमेडियनहरुको यस लेखमा हामी चर्चा गर्ने छौँ।
लामो समय देखि बलिउडमा सक्रिय रहेका जोनी लीवरलाई बलिउडमा छुट्टै दर्जामा राख्ने गरिन्छ। चलचित्रमा मात्र नभई स्ट्यान्डअप कमेडीमा पनि नाम बनाएका जोनी लीवर धेरै कमाउने कमेडियनमा पर्छन्। ३०० भन्दा धेरै चलचित्रमा काम गरिसकेका उनको कूल सम्पति लगभग ७० देखि ८० करोड भारतीय रुपैयाँ रहेको बताउने गरिन्छ।
दक्षिण भारतीय चलचित्र क्षेत्रमा अत्याधिक चर्चित ब्रह्मानन्दमलाई चलचित्रमा देखिएन भने खल्लो हुन्छ भन्ने धेरैको भनाइ छ। उनले अहिले सम्म १००० भन्दा धेरै चलचित्रमा काम गरिसकेर रेकर्डनै बनाइसकेका छन्। उनी दक्षिण भारतीय चलचित्र क्षेत्रमा केहि नायक भन्दा धेरै पारिश्रमिक लिने गर्छन्। भारतीय मिडियाहरुको अनुसार उनको कुल सम्पति १००० करोड भारतीय रुपैया भन्दा धेरै रहेको छ।
खलनायक मात्र नभई कमेडी पनि राम्रो गर्ने परेश रावल पनि एक पूराना कमेडीयन रहेका छन्। उनी धेरै समय देखि बलिउडमा सक्रिय रहेका छन्। उनलाई एक पोक्त अभिनेताको रुपमा सम्मान मिल्ने गरेको छ। उनी पनि धेरै कमाउने कलाकारको शुचीमा पर्छन्। उनको सम्पति १०० करोड भारतीय रुपैंया भन्दा धेरै रहेको बताउने गरिन्छ ।
कतै तपाईलाई धनलाभ हुदै छ भने पहिले नै यस्ता संकेत देखा पर्ने छन, सबैले जानकारी लिनुहोस
जीवनकालमा मागि बिहे गर्दै हुनुहुन्छ भने सफल जीवनसाथीका लागि अबस्य अनिवार्य सोध्नुहोस